Guddooniyaha Golaha Shacabka oo Ingiriiska kala hadlay Doorashada Koofur Galbeed – Kalfadhi
Guddooniyaha Golaha Shacabka oo Ingiriiska kala hadlay Doorashada Koofur Galbeed
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa maanta Safiirka Ingiriiska u jooga Soomaaliya, David Concer, waxa uu kala sheekeystay Doorashada Madaxweynaha ee Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed, oo lagu wado iney Baydhabo ka dhacdo 19-ka bishan. Sida uu sheegay Xafiiska Warfaafinta ee Golaha Shacabka, waxa uu sidoo kale Guddoomiyahu si guud ugala hadkay Safiir David Doorashooyinka Dowlad Goboleedyada ku soo fool leh sanadka soo socda.
Guddoomiye Mursal waxa uu David Concer la socodsiiyey shaqada Golaha Shacabka, gaar ahaan Xeerarka iyo Dowladeynta ay ku hawlan yihiin. Waxa uu u sheegay inuu Goluhu ansixiyey hindise sharciyeedyo, kuwa kalena uu hadda ka shaqeynayo. Dhamaan shaqooyinka uu Goluhu haayo iyo kuwa ay hayaan laamaha kale ee dowladda ayuu Guddoomiye Mursal safiirka hortiisa uga mahadceliyey kaalinta ay Dowladda Ingiriisku ka qaadatay hawlahaas.
“Mudane Safiir aad baan ugu faraxsanahay inaan mar kale halkaan ku kulanno. Waxaan rabaa inan halkaan kaaga caddeeyo in dowladda UK aan abaal weyn u heyno. Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay in ay sii xoojiso xiriirka wanaagsan ee naga dhaxeeya (UK)”. ayuu yiri Guddoomiye Mursal. Hase ahaatee, wax faahfaahin ah oo uu Xafiiska Warfaafinta ee Goluhu ka bixiyey ma jirin waxa ay Safiirka iyo Guddoomiyahu iska dheheen Doorashooyinka Dowlad Goboleedyada, gaar ahaan tan Koofur Galbeed iyo Shuruucda uu Goluhu ka shaqeeyey ama ka shaqeynayo.
Kulanka uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, la yeeshay Safiirka Ingiriiska, David Concer, waxa uu ku soo beegmay iyada oo uu maanta baaqday Kulankii 31-aad ee Golaha Shacabka, iyada oo aysan Xildhibaanadu si rasmiya u ogaan sababta baaqashadaas, taas oo sidoo kale imaaneysa waqti la hadal hayo mooshin ay Xildhibaano ka tirsan Golaha ka wadaan hishiisyada ay Xukumadda Soomaaliya la soo gasho Dowladaha kale, gaar ahaan kuwa la deriska ah Soomaaliya.
Horay waxaa u taagnaa khilaaf u dhaxeeyey Golaha oo ku saabsanaa kala diristii Guddiga Maaliyadda ee Golaha oo ka dhashay eed maaliyadeed oo ay dusha u saareen Wasaaradda Maaliyadda iyo Guddoomiyaha Golaha Xildhibaanno uu ka mid yahay oo DFS ku diiddan ciidanka ay geysay Baydhaba iyo aragtideeda ku wajahan Musharaxnimada Mukhtaar Roobow Cali, oo horay u soo ahaa Hogaanka Al-Shabaab.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo ay Jubbaland ka ogolaatay in la xaliyo khilaafka kala dhexeeya DFS